Mana Maree Yunaaytid Isteets, Kaapitool Hiil
Deggertoonni Prezidaant Traamp kaleessa “Capitol Hill” yokaan waajira Mana-maree Yunaayitid Isteetisitti humnaan girrisanii seenuu ilaalchisee, miiraa fi ilaalchawwan wal-makaa akka rifaatuu, gaddaa fi qeeqaa tu biyyoota Addunyaa irraa dhaga’amaa jira.
“Wanni Waashington Diisii keessatti mul’ate amala Ameerikaa miti. Nuti jabina dimiikiraasii keenyaatti amanna. Dimookiraasiin Ameerikaa cimaa tahuutti amanna,” jedhan, prezidaantiin Faransaay, Imaanu’eel Maakiroon, dhaamsa kaleessa Viidiyoodhaan dhageessaniin.
Muummichi-ministaraa Hindii, Naarendaa Moodii immoo, dhaamsa fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreessaniin, mormii fi hookkara Waashington Diisii keessatti geggeessame ennaa argan, baay’ee gadduu isaanii ibsan.
“Karaa nagaa aangoo walitti-dabarsuun itti fufuu qaba. Hiriirawwan hookkaraa seeraa-ala geggeessamaniin kun hanqifamuu hin qabu,” jedhan.
Ministarri Dhimma-alaa Taayiwaanis gama isaaniin dhaamsa kaleessa dabarsaniin hookkara kaleessa Waashingtonitti geggeessametti gadduu isaanii dubbatan. Akka dhalattoonni Taahiwaan Waashington DC keessaa jiraatu of eeggachuuf qophaa’an fi nageenya isaaniif dursa kennan dhaamsa hatatattamaa dabarsuu isaaniis dubbatan.
Ministarri Dhimma-alaa Paakistaan , Zaahid Hafeez Chaawudiriis, wanna Waashinton keessatti tahaa jiru kan itti dhiheenyaan hordofaa jiran tahuu ibsanii, “haalli sun dafee tasgabaawa, deemsa aangoo walitti dabarsuu irratti dhiibbaa hin qabaatu,” jennee abdanna jedhan.